Inter Milan Oo Ku Dhawaaqday Natiijada Baadhitaankii Caabuqa Korona Ee Dhammaan Xiddigaha & Shaqaalaha Kooxdeeda - Gool24.Net
Inter Milan Oo Ku Dhawaaqday Natiijada Baadhitaankii Caabuqa Korona Ee Dhammaan Xiddigaha & Shaqaalaha Kooxdeeda
17/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Inter Milan ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee Talyaani ah ee shaacisa natiijada caafimaad ee xiddigaha kooxdeeda ee laga baadhay xanuunka dunida dhibaatada ba’an u geystay ee Korona oo si gaar ahaaneedna u dhibay dalka Talyaaniga.
Koox kasta oo Serie A ah ayaa xiddigaha kooxdeeda iyo shaqaalaha caafimaad ee ay khusayso ayaa haatan haya shaqada ah in xiddigaha kooxahaas tijaabada caafimaad laga qaado kahor inta aan la bilaabin tababarka.
Qorshaha haatan ee kooxaha Talyaaniga ayaa ah in haddii hal qof laga helo xanuunka ama shaqaale ha ahaado amaba ciyaaryahan ha ahaadee laga karantiimo doono kooxda inteeda kale.
Hanaanka caafimaad ee Talyaaniga ayaa ah mid aan wali si buuxda la iskula meel dhigin inta lagu gudo jiro wakhtigan adag gaar ahaan sida ay dawlada iyo kooxuhu uga wada shaqaynayaan.
Dawlada dalkaas ayaa doonaysa in haddiiba hal ciyaaryahan xanuunka laga helo dhammaan kooxdiisa oo dhan 15 maalmood karantiin la geliyo halka ay kooxuhu doonayaan in kaliya shaqsiga xanuunka laga helo la karantiimo.
Si kastaba, warbixinta Inter ay haatan soo saartay ayaa lagu sheegay in dhammaan tijaabooyinkii caafimaad ee la qaaday Jimcihii ay noqdeen kuwo dhammaan shaqsiyaadka kala duwan ee kooxdaasi lagaga waayay xanuunka.
“FC Internazionale Milano waxay ku dhawaaqaysaa in dhammaan natiijada tijaabooyinkii laga qaaday Jimcihii ciyaartoyda kooxda, shaqaalaha tababarka, shaqaalaha maamulka ee kooxda iyo inta kale ee kooxdu ay soo noqdeen iyaga oo taban (Negative ah)”